Madaxweynaha Soomaaliya oo safar kumaraya dowlad deegaanka Soomaalida Itobiya. – Radio Daljir
Agoosto 11, 2016 1:05 b 0
Muqdisho, Aug 11 2016–Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu horkacayo ayaa booqasho ku jooga magaalada Jigjiga ee caasimadda Dowlad Degaanka Soomaalida Ethiopia.
Waa markii ugu horeysay ee Madaxweyne Soomaaliyeed uu booqdo magaaladan Jigjiga, taas oo booqashan ka dhigeysa mid taariikhi ah, qeybna ka ah xoojinta xiriirka labada dal ee deriska iyo walaalahaba ah.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la yeeshay madaxda degaanka oo uu ka mid yahay Madaxweynaha Dowlad Degaanka Soomaalida Ethiopia, Mudane Cabdi Maxamuud Cumar.
DHEGEYSO-Diyaarado duqaymo ka fuliyey qaybo kamid ah Jubbooyinka.